दु'खद खबर: होली खेल्न हिडेको गाडी दु’र्घटना १३ जना को घ’टना स्थलमै मृ’त्यु दर्जनौं घा’इते - Onlines Time
दु’खद खबर: होली खेल्न हिडेको गाडी दु’र्घटना १३ जना को घ’टना स्थलमै मृ’त्यु दर्जनौं घा’इते
March 29, 2021 onlinestimeLeaveaComment on दु’खद खबर: होली खेल्न हिडेको गाडी दु’र्घटना १३ जना को घ’टना स्थलमै मृ’त्यु दर्जनौं घा’इते
दिल्ली: मध्य प्रदेश को ग्वालियर मा एक सड़क दुर्घटना मा 13 जनल को मृ’त्यु भएको छ। बस मध्य प्रदेश ग्वालियर मा एक ऑटो-रिक्शा संग ठो’किएको थियो,समाचार एजेंसी एएनआई को रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार ले मृ’तक का परिवार लाई4लाख र दु’र्घटना मा घा’इते हुनेलाई 50,000 सहयोग दिने घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं। भारतको झारखण्डमा एक घरमा ग्यास सिलिण्डर वि:ष्फोट हुँदा २ बालबालिकासहित ४ जनाको मृ:त्यु भएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार झरखण्डको गिरिडिहको तिसरी थाना षेत्रमा बुधन राय नामका व्यक्तिको घरमा वि:ष्फोट भएको हो । शनिबार अबेर राती सवा १० बजे सिलिण्डर वि:ष्फोट हुँदा पूरै घर उडेको थियो ।
जानकारी अनुसार बुधन राय परिवारसहित खाना खाएपछि सुत्न गएका थिए । यही बीच राती सवा १० बजेतिर अचानक घरमा राखिएको सिलिण्डर वि:ष्फोट भयो । विष्फोटमा बुधन रायकी पत्नी कामेश्वरी देवी, बुहारी सुनीता देवी, नाती आयुष कुमार र अर्का नवजात नातीको मृ:त्यु भएको छ । घरमा जीवित रहेकाहरु पनि घरको भग्नावशेषमा दबिएका थिए ।
बुधन रायले खानीमा वि:ष्फोट गराउनको लागि वि:ष्फोटक पदार्थको आपूर्ति गर्ने र घटनाका बेला उनको घरमा वि:ष्फोटक पदार्थ समेत भएको बताइएको छ । डिएसपी सन्तोष मिश्राका अनुसार उद्धार कार्य भइरहेको छ ।काठमाडौं। भारतको झारखण्डमा एक घरमा ग्यास सिलिण्डर वि:ष्फोट हुँदा २ बालबालिकासहित ४ जनाको मृ:त्यु भएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार झरखण्डको गिरिडिहको तिसरी थाना षेत्रमा बुधन राय नामका व्यक्तिको घरमा वि:ष्फोट भएको हो । शनिबार अबेर राती सवा १० बजे सिलिण्डर वि:ष्फोट हुँदा पूरै घर उडेको थियो ।
बुधन रायले खानीमा वि:ष्फोट गराउनको लागि वि:ष्फोटक पदार्थको आपूर्ति गर्ने र घटनाका बेला उनको घरमा वि:ष्फोटक पदार्थ समेत भएको बताइएको छ । डिएसपी सन्तोष मिश्राका अनुसार उद्धार कार्य भइरहेको छ ।
भाइरल चियावालिको घरमा पुग्दा आमा भा’वुक भइन ,आफुलाई धेरै दुख भएको भन्दै धु’रुधु’रु रोइन (हेर्नुस् भिडियो )
राउटे समुदायकै सबैभन्दा राम्रि सम्झनाको आयो मिउजिक भिडियो ,एकैछिनमा भाइरल (भिडियो हेर्नुस् )
नेपाली सेनाले देखायो बहादुरी ! भयो चौतर्फी प्रशंसा! कङ्गो बाट आयो यस्तोखुशिको खबर
संसारका सबभन्दा धनी अम्बानीको कसरी सकि’यो सम्पत्ति, गहना सबै बेचियो, पकेट खर्च श्रीम’तिबाट !
November 20, 2020 November 20, 2020 onlinestime
अफगानिस्तानमा से’नाको हे’लिकप्टर दु’र्घटना हुदा चालक द’लका सदस्यसहित ९ जनाको मृ’ त्यु